Ukwenza umculo omusha ngobuhlakani bokufakelwa 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ubuhlakani bokufakelwa, okwamanje, budlula kakhulu ukuhlolwa futhi buyabamba kumaphrojekthi amaningi nasekusebenziseni okusebenzayo. Phakathi kwalokhu, leyo yomculo odidiyelayo iguquka kakhulu, ukuze nalabo abangenalo ulwazi lwezinsimbi zomculo noma abanesipiliyoni ekuculeni basengazijabulisa futhi baveze imibono yabo. Ubuhlakani bokufakelwa obusetshenzisiwe emculweni busebenza nge-algorithm okuthi, ngokuhlola inani elikhulu lokurekhodwa, ikwazi ukukhiqiza ngokuzenzakalela ukwakheka komculo okusha nokuhlukile. I-algorithm ihlanganisa izendlalelo zemisindo eyenziwe ngama-loops, nolayini abahlukile bethuluzi ngalinye lomculo.
Kukhona eziningana izinhlelo zokusebenza zewebhu ongazama ngazo ukukhiqizwa komculo usebenzisa ubuhlakani bokufakelwa engasetshenziselwa ukulalela noma njengesizinda sevidiyo, umdlalo wevidiyo noma enye iphrojekthi. Ezinye izibonelo zezinhlelo zokusebenza ezizokhiqiza umculo omusha nge-AI ziyatholakala, mahhala, kumasayithi alandelayo.
FUNDA NONKE: Amasayithi wokudlala ku-inthanethi futhi enze umculo nokuhambisana
1) Okukhiqizayo.fm Kuyinto a isizinda somculo, kuhle ukusetshenziselwa ukuphumula futhi ugxile, uhlala unomphela. Umculo okulesi siza awuqanjwa othile, kodwa wenziwa ngokuzenzekelayo futhi awupheli.
2) UMubert Yiprojekthi eguqukayo, ongayihlola kunguqulo yedemo. Khetha ubude besikhathi (ubuningi bemizuzu engama-29) nohlobo lomculo (Ambient, Hip-Hop, Electronic, House nabanye) noma isimo (kuyadabukisa, kujabulisile, kushubile, kukhululekile, njll.), lapho-ke ungadala ithrekhi ezoba entsha ngaso sonke isikhathi, ongayilalela ekusakazeni nokuthi ungalanda futhi nge $ 1 ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kumaphrojekthi akho ngaphandle kokukhathazeka ngamalayisense namalungelo Kusuka kumbhali. . UMubert angaqamba umculo we-elektroniki ngesikhathi sangempela esivumelana nokuthandwa ngumsebenzisi ngamunye, ukuze abantu ababili kungadingeki balalele into efanayo.
3) Aiva.ai isayithi ongalisebenzisa mahhala dala umculo omusha. Lapho wenza i-akhawunti, ungachaza amanye amapharamitha afana nohlobo, ubude besikhathi, izinsimbi zomculo, ubude besikhathi, nokuningi ukukhiqiza ngokuzenzakalela ukwakheka okusha komculo okungalalelwa ku-inthanethi noma kulayishwe. I-Aiva.ai iphrojekthi ephelele online, kufanele uyizame. I-Aiva nayo inesihleli sebha ukuphatha umculo, ukuhlelela ngendlela othanda ngayo, engeza imiphumela kanye nolayini abasha bezinsimbi zomculo. Izinga lomhleli lingaba nzima uma ungenalwazi.
4) Umsindo.io kungenye indawo yamahhala yokudala umculo omusha usebenzisa ubuhlakani bokufakelwa. Ngokwakha i-akhawunti yamahhala, ungakhetha ngokushesha uhlobo, imizwa, izinsimbi, isikhathi, ubude besikhathi, bese ulalela amathrekhi akhiqiziwe.
5) I-Ampermusic ngesinye isiza sokukhiqiza umculo onamandla amakhulu, mhlawumbe lowo okuvumela ukuthi ube yimbudumbudu ngaphezulu ekukhetheni kwezici okufanele ukwakheka okusha kube nakho. Lapha ungakwazi futhi ukufinyelela ithuluzi ngokwakha i-akhawunti yamahhala. Lapho wenza iphrojekthi entsha ozoyibhala, awukwazi ukuchaza uhlobo kuphela, kepha futhi ukhombise uhlobo lwesampula phakathi kwalabo abahlongozwayo bese ukhetha uhlobo lokushaywa, izinsimbi zomculo, njll. ngengoma entsha.
IBHONASI: Ukuqedela i-athikili, kufanelekile ukubika kusayithi lokuzijabulisa. I-Google Blog Opera, okwenza amabala amane ahlukene anemibala acule, ngalinye linezwi le-opera lesiTatar, ngalinye linethoni ehlukile (ibass, tenor, mezzo-soprano ne-soprano). Amazwi aqoshwa ngabaculi abaqeqeshiwe futhi angahlehliswa ngokuhlukile ngokuhambisa izindawo ezahlukahlukene, abahudulele phezulu nangaphansi ngakwesobunxele nangakwesokudla. Ngokuhamba kwesikhathi, ungakha umculo wephathi kaKhisimusi, uhlobo olucula esontweni, kusukela ekuqaleni bese ukurekhoda ukuze wabelane ngakho. Usebenzisa iswishi kaKhisimusi ungalalela ezinye zezingoma zikaKhisimusi ezidume kakhulu eziculwa ngamabhamuza. Imodeli yobuhlakani bokufakelwa isebenzisa amazwi atholwe abaculi ukwenza ama-blobs ashaye amanothi afanele futhi adale imisindo efanele ukukhiqiza ingoma ejabulisayo neyomkhosi, okwenza nabo bacule.
FUNDA NONKE: Izinhlelo zokusebenza ezingama-30 zokudlala nokwenza umculo ku-Android, i-iPhone ne-iPad
Bamba iphathi ebonakalayo nabangani noma umndeni kukholi yevidiyo yeqembu